Ọ bụrụ na ị kpebiri download Linux na-eji ya maka arụmọrụ gị n'elu ikpo okwu, unu nwere ike achọpụtala na mgbe ụfọdụ, ọ na-esi ike ịhụ software iji na ya. E nwere n'ezie a ọnụ ọgụgụ nke omume na nwere ike ịgbanwe gị Linux kọmputa n'ime a dị ike multimedia igwe. Ka na-lee anya na iri kasị mma DVD ọkpụkpọ omume maka Linux.
1. VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
VLC bụ na-enweghị a doro anya na ndị kasị ewu ewu na-emeghe isi media ọkpụkpọ maka Windows kọmputa. Ọ bụ na-maka Linux ígwè ọrụ. Ọ bụghị nanị na o nwere ike na-egwu ihe ọ video Ọkpụkpọ na ọdịyo faịlụ, ma ọ bụ oké n'ihi egwu na-akpọ DVD na nkwanye internet video. Ọ bụ ike nke na-akpọ ihe ọ faịlụ ma ọ bụ video-enweghị na-akpa download a codec. Ọ bụ kpam kpam free na mgbe kemgbe, gbakwunyere ọ bụ free nke bloatware (mmemme bundled na eleghị anya ị na-agaghị ibudata ma). The ọcha interface na-akpọ mgbe ụfọdụ na-agwụ ike site na ọrụ, ma ọ bụ na-hụrụ ka mfe na-amụta na-eji site na ọtụtụ ndị ọzọ.
Totem e wuru iji mara na na GNOME Ubuntu desktọọpụ. Ọ bụ oghe isi software dabeere GStreamer nke nwere nnọọ ọtụtụ nke atụmatụ. Ị na-ekiri fim ihuenyo zuru ma na-eme na ihuenyo Onye ndu nakwa dị ka ewu listi ọkpụkpọ. Play DVD na VCDs site na nke a ọkpụkpọ, ma ọ bụrụ na ị ebudatara Firefox, e nwere Mozilla ikwunye-ins na ka ị na-ele gị online nkiri dị na nchọgharị. Mgbe ị na Ibu Ibu a nkiri, ọ ibu na ndepụta okwu-akpaghị aka. A video equalizer-ahapụ gị kpatụ iche, nchapụta, na saturation nke videos mgbe ị na-akpọ ha. Ọ pụrụ ọbụna aka 5.1 igbagburugburu ụda ọdịyo.
The zuru okè ọkpụkpọ-eso a iko kọfị, nke a n'ụzọ zuru ezu-apụta mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ike ijikwa video faịlụ, audio CD na DVD na k desktọọpụ ebe, ma ọ bụ KDE, na-eji xine dị ka ya azụ-ọgwụgwụ. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na GStreamer dị ka mma. Ị ga-ahụ gị maara menus on DVD na ị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ na-. Kaffeine nwekwara ike aka ndụ gụgharia faịlụ. Ọ bụrụ na ị nwere dijitalụ video Broadcasting ngwaọrụ, i nwere ike iji Kaffeine na ya.
Xine bụ a freeware omume na a mara mma nke ukwuu interface. Ọ bụ a GPL ikikere omume na ike ijikwa VCDs, DVD, na CD. Plus bụrụ na i nwere ndị ọzọ video faịlụ, Xine nwere ike igwu kasị nkịtị formats ka nke ọma, gụnyere WMA, AVI, na MOV faịlụ. Ọrụ na-akpọ playback oyiyi "ire ụtọ". Ọ na-arụ ọrụ ọ bụghị nanị Linux, ma ndị ọzọ na nyiwe, kwa, gụnyere Mac OSX. Ụfọdụ ọba akwụkwọ nwere ike na-kwajuru na-zuru uru nke usoro ihe omume, ma n'ihi na ọtụtụ ọ bụ njikere ịga ozugbo ọ ebudatara. Mmepụta nchịkọta na-achọrọ maka ọbá akwụkwọ.
5. Real Player 10
Nke a version nke Real Player bụ dakọtara na Linux. Mgbe e mesịrị nsụgharị esiwo ka ígwé ojii na-arụ ọrụ kasị mma na a Windows igwe, ma nke a version bụ ka dị maka download ma ka na njikere na-egwu gị videos na gị Linux igwe. E wezụga DVD, o nwere ike ịrụ nta ọ bụla video na ọdịyo faịlụ si n'ebe. Download videos ị na-ahụ site na a dịgasị iche iche nke saịtị n'ihi playback mgbe e mesịrị, na ike gị onwe gị listi ọkpụkpọ na n'ọbá akwụkwọ. Ị na-kwukwara atụmatụ nke inwe ike dezie videos mgbe ahụ Ibu Ibu jidesie bụla ọnụ ọgụgụ nke obere egwuregwu. Ị nwekwara ike enuba audio site Real Player.
MPlayer video ọkpụkpọ nwere ike ijikwa kasị nkịtị video faịlụ formats, gụnyere WMV, AVI, na MOV, ọ na-arụ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmepụta ọkwọ ụgbọala. Ọ na-arụ a dịgasị iche iche nke discs, gụnyere video CD, DVD, na SVCD discs. The interface bụ na-akpali, ndị ruru eru nke merging a di na nwunye nke scripts ọnụ na-enwe abụọ dị iche iche ndepụta okwu na ihuenyo n'otu oge. I nwekwara ike ele mechiri emechi captioning. The interface na-nnọọ n'ụzọ ezi uche ẹkenịm, na-emebu software menus gafee n'elu na a dị ọcha set nke njikwa na ala. Global ọrụ ga na-enweghị nsogbu, dị ka e nwere enyo na a otutu mba na ọtụtụ asụsụ dị na ndepụta okwu.
Nke a bụ na-emeghe isi omume wuru maka Linux, mgbe ụfọdụ, a na-akpọ Balto. Helix ngwugwu a otutu atụmatụ n'ime ya koodu. Mepụtara site Real Networks, ọ bụ ike nke na a na-eji on a dịgasị iche iche nke sistem, ọbụna obere ngwaọrụ dị ka igwe. Dị ka ọtụtụ omume na Linux ụwa, ọrụ nwere ike ime ka aro ka mmepe ka mma usoro ihe omume. Helix bụ ike kpọọ vidiyo na kasị mma bit ọnụego mgbe nkwanye ekele a mma na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ bandwit. Zuru ezu na igbagburugburu ụda n'ihi na ihe uku audio, Helix nwere ike igwu a dịgasị iche iche nke usoro mgbasa ozi.
Nke a freeware omume nwere ike ijikwa a dịgasị iche iche nke aga-eme na ọtụtụ ndị ọzọ na mmemme na-dị nnọọ egwuregwu ike. Ọ bụghị nanị na-arụ a dịgasị iche iche nke video faịlụ formats, ma ọ nwere ike ijikwa HD dị ka mma. Ọ na-eme dị ka a YouTube download omume na HD download ikike. Ị nwere ike Ibu Ibu gị ugbu a iTunes n'ọbá akwụkwọ n'ime Miro na-egwu ọdịyo na video n'ebe ahụ, na-enweghị n'ezie na-ebufe faịlụ n'ime Miro, ya mere ha Aga ka na-ghọtara site iTunes. Ị nwere ike tọghata faịlụ Ibu Ibu gị Kindle Fire na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Emepụta site a na-abụghị uru, Miro bụ ma freeware na-emeghe isi, n'ihi ya, ọrụ nwere a ikwu n'ime otú ọ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a kọmputa DVD ọkpụkpọ na-arụ ọrụ a ọtụtụ dị ka a free-eguzo ntụrụndụ usoro nlereanya na-eme, Ogle bụ gị ghota. Ọ na atụmatụ DVD menus, mbugharị ikike, awụgharị, multi-ọwa ọdịyo mmepụta, na ibe edokọbara. Ogle nwere ike ọ dị, na-egwu DVD na-abịa na izo ya ezo iji gbochie ripping. Ọ bụrụ na ị na achọghị onyeōzi ọrụ interface (GUI), ị nwere ike ibudata a version enweghị ya. Ọ bụ kpam kpam free omume ikikere n'okpuru GNU ọha ikike, na n'adịghị ka ndị ọzọ omume anyị na-ele anya, ọ bụ naanị maka egwu na-akpọ DVD.
10. SM ọkpụkpọ
Egbu, anyị ga-ele anya na a video ọkpụkpọ na retains niile nke gị onye na ntọala gị na videos. Ọ bụ ike nke na-akpọ a dịgasị iche iche nke formats nke ọdịyo faịlụ na videos, nakwa dị ka DVD. Ọ bụrụ na-amasị gị ịgbanwe ma ọ bụ download gị onwe gị ndepụta okwu, a usoro ga-ekwe ka ị na-eme. The equalizer-enyere gị aka melite gị onwe gị ụda playback ndokwa. SM Player bụ freeware na arụ ọrụ na ma Linux na Windows, Ya mere, n'agbanyeghị nke ogige ị wụnye ya na, ọ ga-arụ ọrụ. Ọ na-adịghị achọ wụnye codecs iche iche.
Anyị nwere olileanya na iri a utu aha na-enye gị ụfọdụ echiche na nke video Player na ị chọrọ Ibu Ibu jidesie gị Linux igwe na-atụgharị ya n'ime center nke na kọmputa gị media usoro. Gbalịa otu ma ọ bụ ha nile - na ha na free mere na ị na-agaghị na-ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ma na-achọ nwalee a dị iche iche onye.
Bụ n'ebe ọ bụla Online DVD burner?
Olee otú Mepụta ihe Aperture ngosi mmịfe na Ọkụ ka DVD
> Resource> DVD> Top Iri Best Linux DVD Players